Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovana tadiavina | China Factory Deshedding Tool Factory
Fitaovana faniry alika roa loha
1.Ny alika lohan'olon-droa miaraka amin'ny nify nozaraina tsy tapaka mba hanala haingana ny volo, fatotra ary kitrokely ho an'ny valin'ny fikolokoloana tsara kokoa.
2.Ny alika roa loha dia tsy manala ny palitao maty fotsiny, fa manome fanorana amin'ny hoditra ihany koa mba handrisihana ny fivezivezen'ny rà mandriaka.
3.Ny lohan'ny alika roa loha dia ergonomika miaraka amin'ny fametahana malefaka manohitra. Mety tsara amin'ny tànana izany. Aza ketraka intsony ny tanana na ny tanana raha mbola miborosy ny biby fiompinao ianao.
Fitaovana DeShedding ho an'ny alika
1.Deshedding Tool ho an'ny alika miaraka amin'ny sisin'ny vy tsy misy fangarony dia mahatratra amin'ny topcoat mba hanala mora foana ny volo malalaka sy ny akanjo ambany
2.Ny fitaovana tsy ampoizina ho an'ny alika dia manana kofehy vy tsy miolakolaka, tonga lafatra amin'ny vatan'ny biby ny biby fiompy malalanao izay hankafy kokoa ny fizotrany fikarakarana, mety amin'ny saka sy alika ary biby hafa manana volo fohy na lava.
3. Ity fitaovana tsy ilaina amin'ny alika ity miaraka amin'ny bokotra famotsorana kely, tsindrio iray monja hanadiovana sy hanesorana volo 95% amin'ny nify, tazomy ny fotoananao hanadiovana ny tohotra.
Borosy borosy amboa alika
1.Ny alika mandatsaka borosy borosy dia manana volom-baravarana azo ovaina sy mihidy miaraka amin'ny tahony izay azo sarahina mba hamoronana rakes mandripaka 14 santimetatra izay mahatonga azy io ho haingana sy mora ampiasaina kokoa.
2. Ity alika manidina borosy borosy ity dia afaka mitondra soa aman-tsara ary manaisotra haingana ny volo biby fiompy malalaka hampihenana ny fandatsahana azy. Azonao atao ny manamboatra ny biby fiompinao ao an-trano.
3.Misy hidy eo amin'ny tahony, azo antoka fa tsy hihetsika ny lelany mandritra ny fikolokoloana
4.Ny alika nandatsaka borosy borosy dia mampihena ny fandatsahana hatramin'ny 90% miaraka amina seza fikolokoloana mandritra ny 15 minitra isan-kerinandro.
Borosy fitaovana alika sy saka maniry
Ny fitaovan'ny alika sy saka tadiavina saka dia haingana, mora ary fomba haingana hanesorana sy hampihenana ny palitaon'ny biby fiompinao mandritra ny minitra.
Ity alika sy saka ity dia mila ampiasaina amin'ny alika na saka, na lehibe na kely. Ny alika sy ny sakafon'ny sakaizantsika dia mampihena ny fandatsahana hatramin'ny 90% ary manala ny volo misavoritaka sy matevina nefa tsy mitebiteby.
Ity alika sy saka tadiavin'ny saka ity dia mamono volo, loto ary potipoti-javatra avy amin'ny palitao biby fiompinao, mamelatra sy mahasalama hatrany!